Mzala wami Mzala! Ngiyethemba nisaphila nabantwana. Nami ngiyaphila noma umkhuhlane wobusika ucishe wedlula nami nje. Ngahamba kahle nangalelalanga noma ngaze ngafika ngakusasa ekhaya ngenxa yetransport. Ngahlala ewaiting room kwaze kwashaya u 21h00 ebusuku lingafiki ibhasi. Cabanga-ke mzala ngingedwa nje umuntu … Continue reading →